ကွန်ပျူတာဘာသာပြန်နည်းစနစ်များကို ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နေရာပေါင်းများစွာတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုနေကြသည်။ နိုင်ငံအသီးသီးရှိ တက္ကသိုလ်များ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရဌာနများက ငွေကြေးအမြောက်အမြား အကုန်ကျခံ သုံးစွဲ၍ အကောင်အထည်ဖော်လျက် ရှိကြသည်။ တစ်ကိုယ်ရေသုံး အိတ်ဆောင် ဘာသာပြန်စက်ငယ်လေးများမှ စစ်မြေပြင်သုံး Smart Phone နည်းပညာများအထိ ရောက်ရှိနေပါသည်။ အမေရိကန်တို့ အာဖကန္နစ္စတန် သို့ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်စဉ်က အဖြစ်အပျက်တစ်ရပ်ကလည်း ဤနည်းပညာ၏ အသုံးဝင်မှုကို ပေါ်လွင်စေခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် ၂၀⁠၀၁ အမေရိကန်တို့ အာဖကနစ္စတန်ကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီး နောက်ပိုင်း အာရပ်ဘာသာစကားသည် အဓိကပြဿနာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ လိုက်ပါတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ စကားပြန်များခေါ်ယူခဲ့သော်လည်း စစ်ပွဲအတွင်းမို့ လိုက်ပါလိုသူ သိပ်မရှိလှ။ ခေါ်ဆောင်လာသည့် ဘာသာပြန်အတော်များ⁠များလည်း သေနတ်ဆံ၊ဗုံးဆံ ကြောက်၍ ပြန်ပြေးကြသူများနှင့်သာ ပြည့်နေသည်။ အမေရိကန်တို့ ခေါင်းချင်းရိုက်ကုန်ကြသည်။ ဘာသာပြန်တွေ မရှိလို့မဖြစ်။ နောက်ဆုံး ဒီပြဿနာက အမေရိကန် အဆင့်မြင့် ကာကွယ်ရေး သုတေသန အေဂျင်စီ (DARPA) သို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ DARPA က အမျိုးသား စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကြီး(NIST) သို့ လူအစားထိုး အင်္ဂလိပ်-အာဖကန် ကွန်ပျူတာ ဘာသာပြန်စနစ် တစ်ရပ် အကောင်အထည် ဖော်ပေးရန် ပန်ကြားလေသည်။ သို့နှင့် ကွန်ပျူတာ ဘာသာပြန် လုပ်ငန်းစဉ်မှာ နည်းပညာနယ်ပယ်မှသည် စစ်မြေပြင်သို့ပင် ကျယ်ပြန့်စွာရောက်ရှိလာတော့သည်။
ကွန်ပျူတာဘာသာပြန်စနစ် -- Machine Translation (MT)[ပြင်ဆင်ရန်]
ကွန်ပျူတာဘာသာပြန်စနစ် (MT) ဆိုတာ ဘာလဲ ?[ပြင်ဆင်ရန်]
၁။ အလွန် လျင်မြန်မှု ရှိသည်။
MT ရဲ့ မကောင်းတဲ့အချက်တွေကရော ?[ပြင်ဆင်ရန်]
MT ကို ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေ/ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ အဓိကသုံးမှာလဲ ?[ပြင်ဆင်ရန်]
၃။ လူဘာသာပြန်များကို ငွေကြေးအမြောက်အမြားသုံးစွဲပြီး ငှားရမ်းခြင်းမပြုနိုင်သည့် နေရာမျိုးတွေ
ကွန်ပျူတာဘာသာပြန်ဆိုမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ အဓိက အခက်အခဲများ[ပြင်ဆင်ရန်]
၂။ စကားလုံး အဓိပ္ပာယ် မျိုးစုံကွဲပြားခြားနားခြင်း (Word sense disambiguation)
စကားလုံးတစ်လုံးဟာ အဓိပ္ပာယ်မျိုးစုံ ရှိနေတာမျိုးဟာ ဘာသာစကားတိုင်းလိုလိုပါပဲ။ ဥပမာ Have ဆိုတဲ့စကားလုံးကို စားတယ်၊ သောက်တယ်၊ ရေချိုးတယ် အစရှိဖြင့် စာကြောင်း အနေအထားများအပေါ် မူတည်ပြီးဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒါတွေ့ဒါပြန် ဆိုတာမျိုး လုပ်လို့မရတော့တာ၊ စာကြောင်းရှေ့နောက်ဆက်စပ် လေ့လာရတာမျိုးတွေ လိုအပ်လာပါတယ်။
လူနာမည်၊ မြို့ရွာတိုင်းပြည်နာမည်၊ အဖွဲ့အစည်းနာမည် စသည်ဖြင့်နာမည်ပေါင်းများစွာဟာလည်း ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းစဉ်ကို များစွာခက်ခဲစေပါတယ်။ စကားလုံးတစ်လုံးတွေ့ရုံနဲ့ နာမည်လား ၊ ရိုး⁠ရိုးအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ စကားလုံးလားဆိုတာ ခွဲခြားဖို့ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ "ဆိတ်ဖြူ" ဆိုတာ မြို့ရွာနာမည်လား? အဖြူရောင်ရှိတဲ့ ဆိတ်ကိုပြောတာလား? "ဖိုးဆိတ်ဖြူ" ဆိုတဲ့ ကာတွန်းဇတ်ကောင်တောင်ရှိနေပါသေးတယ်။ နောက်အခက်အခဲများကတော့
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကွန်ပျူတာဘာသာပြန်စနစ်&oldid=701973" မှ ရယူရန်